Kukwira Kwevanhu-Yakavakirwa Kushambadzira uye Kushambadzira | Martech Zone
Mune yavo whitepaper paPeople-Yakavakirwa Kushambadzira, Atlas inopa mamwe anonakidza manhamba pa kushambadzira kwevanhu-kushambadzira uye kushambadzira. Ndichiri kushandisa yakawanda nguva pane nharembozha, 25% yevanhu vanoshandisa matatu kana akawanda maturusi pazuva, uye 3% yevanhu vanoshandura michina kuti vapedze chiitiko.
Chii chinonzi People-Based Marketing?
Zvimwe zvekushandisa uye mapuratifomu zvinopa vashambadziri kugona kurodha tarisiro kana yevatengi zvinyorwa zvekufananidza vashandisi pakati pezviviri. Rondedzero dzinogona kuiswa uye kuenzaniswa kune vashandisi mukati mevabereki system inoenderana nekero yeemail. Ipapo mushambadzi anogona kunongedza iwo iwo marondedzero ane chaiwo maratidziro.
Ini ndinozviwana ndiri chaiko mune aya ekuyambuka-bvudzi. Ini ndinoshandisa nharembozha yangu kupuruzira nemaemail uye zvemagariro, ipapo piritsi rangu kupindura kune vazhinji, uyezve ndinodzika kubasa repamoyo palaptop yangu. Ichi, chokwadika, idambudziko hombe kune vanoshambadzira. Uchishandisa nzira yewebhu-kuki, zvakaoma kwazvo kubatanidza zvingwa uye kuona tarisiro yako kana mutengi pane chishandiso chimwe nechimwe chavari kushandisa.
Zvinoenderana naNielson OCR Maitiro:
58% yecokie-yakaenzana kuyerwa kwakapfuudzwa
141% kusapindirwa kwehuwandu hweyakawanda mukuki-yakavakirwa chiyero
65% kurongeka mukutarisa kwevanhu mukukiya-kwakavakirwa chiyero
12% yekutendeuka kwakashaikwa necokie-based chiyero
Ndosaka kushambadzira kwevanhu iri kuwedzera. Panzvimbo pekushambadzira kubhurawuza makuki uye kuyedza kubatanidza iwo madhizaini, kambani inogona kurodha yavo tarisiro kana yevatengi rondedzero yakanangana nekushambadzira chikuva uye vozonongedza avo vashandisi pane chero chishandiso. Hazvina kupusa - vanhu vazhinji vanoshandisa akasiyana maemail kero pakati pemagariro mapuratifomu uye mabhizinesi mapuratifomu. Asi ine zvimwe zvisinganakidze zvakanaka pamusoro peyakajairwa kunongedza uye segmentation maitiro.
Signal uye Econsultancy vakaongorora vashambadzi makumi matatu nevashanu veNorth America vatengesi vevashambadziri uye vatengi venhau venhau kuti vanzwisise zvinoitika uye ramangwana renhau dzinogadziriswa mukati memasangano avo. Isu takaona kuti vashambadziri vakagadzirira kuwedzera mari yavo mune inogadziriswa midhiya mhinduro dzinosunga kushambadzira kwavo kune vatengi chaivo munguva chaiyo, ichivapa simba rekutarisa kushambadza kwedigital zvakanyatsojeka uye zvinoenderana. Pakupedzisira, kushambadzira-kwakavakirwa vanhu izano kwavari rekukunda matambudziko epasi-echishandiso nyika.
Mhedzisiro yacho inoshamisa! 70% yevanoshambadzira vakatsanangura yavo yekutanga-bato kunongedza mhedzisiro seyakanaka kana inotarisirwa, 63% yevashambadziri vanotaura yakagadziridzwa yekudzvanya-kuburikidza nemitengo, uye 60% yevashambadzi vakasangana yakakwira shanduko mitengo Huno uzere infographic kubva kuChiratidzo:
Tags: econsultancyFacebookfacebook vateererivanhu vakavakirwavanhu-based advertisingkushambadzira kwevanhuchiratidzoTwitter